Famantaran'ny sakaiza sandoka 14: Ahoana ny fomba hahitana iray kilometatra iray - Fifandraisana
Ny fiainana dia mitondra antsika amin'ny dia mahaliana sasany, ary ny fananana namana mahafinaritra miaraka amintsika amin'ny dia lavitra dia mety hahatonga ny vanim-potoana tsara indrindra sy ratsy indrindra hahafinaritra kokoa.
Izany dia nilaza fa ny fisian'ny namana sandoka sy tsy marina dia mety hahatonga ny toe-javatra tsara indrindra ho mahatsiravina mihitsy, ary ny fitsapana faran'izay ratsy indrindra amin'ny fiainana… manandevo.
Ny tena namana dia eo ho anao rehefa ilainao izy ireo, mahafinaritra sy manohana ary hiantso anao amin'ny safidinao na safidy ratsy ataonao satria tia anao izy ireo fa tsy hoe te hampalahelo anao izy ireo.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo toetra nasehon'ny namana sandoka: Topazo maso izy ireo ary manontania tena raha misy olona ao amin'ny faribolana sosialinao maneho ireo toetra ireo.
Famantaran'ny sakaiza sandoka 14: Ahoana ny fomba hahitana horonantsary iray kilaometatra iray
1. Ianao irery ihany no mandre azy ireo rehefa mila na mila zavatra
“Oh, hey… Tsy mbola niresaka taminao mandrakizay aho, manao ahoana ianao? Malalaka ve ianao amin'ny faran'ny herinandro ho avy? Jereo, mihetsika aho ary mila fanampiana sasantsasany amin'ireo vaton'antsamotady… ”
Mahafinaritra, sa tsy izany?
Ary mahazatra kokoa noho ny mety ho tsapanao.
Mety tsy henonao tamin'ity olona ity nandritra ny enim-bolana na mahery, fa mampihomehy ny fomba nahatongavanao tao an-tsainao raha vantany vao mila fikarakarana asa tanana izy ireo.
Raha nanaporofo ianao fa ho tonga hamonjy ity olona ity isaky ny ilaina dia izany no andraikitra nomen'izy ireo anarana hoe: ny mpanampy, ny mpanamboatra, ilay azon'izy ireo ianteherana.
Hankasitraka anao izy ireo amin'ny fotoana, azo antoka, ary misaotra anao amin'ny pizza sy labiera ary inona no anananao, fa avy eo tsy handre azy ireo intsony ianao mandritra ny enim-bolana farafahakeliny mandra-pahatongan'ny zavatra hafa ilain'izy ireo fanampiana.
2. Mametraka anao izy ireo
Ny fitrandrahana an-tsokosoko amin'ny endriny fanesoesoana, fanabeazana tokana ary fiderana an-damosina dia vitsivitsy monja amin'ireo fomba mety hanandraman'ny namana sandoka hametraka anao mba hahatsapany ho tsara ny tenany.
Matetika izy ireo dia manao izany avy amin'ny toerana mangirifiry, toy ny tsy fananana fiheveran-tena ho ambany, na ny famoahana ny olana mahazo azy ireo amin'ny fomba hafa itovizany amin'ny hafa, saingy ny fahazoana ny toerana niavian'ny fitondran-tenany dia tsy naninona, na mora ny nifanarahana. miaraka amin'i.
Ny sakaiza vavy dia mety hanome akanjo ho an'ny olon-kafa, ary rehefa / raha manandrana izany ny mpandray azy ary maneho hafaliana amin'izany, dia mety hiteny zavatra mitovy amin'ilay izy izy ireo: izaho… Nihevitra aho fa mety aminao izany. ”
mampiaraka amin'ny lehilahy iray manana olan'ny fandaozana
Na, rehefa ampahafantarina ny olon-tianao / sakaizanao vaovao, ny namana sandoka dia mety mamafy voan'ny tsy fandriam-pahalemana, milaza fa mivoaka amin'ny liginao ilay olona ary tsy isalasalana fa hamela anao ho olona tsara tarehy / manankarena / mahomby kokoa.
Mety mikapoka ny mpiara-miasa aminao vaovao eo alohanao aza izy ireo mba hanamafisana ny fitiavany tena.
3. Ianao no kitapom-paosin'izy ireo mampihetsi-po
Fantatrao ve izany olona izay tsy mitantara afa-tsy ny banga mahatsiravina rehetra eo amin'ny fiainany izany?
Ie. Iny iray iny.
Matetika izy ireo dia azo antsoina hoe 'askholes', amin'ny fanontaniany tsy tapaka ny hevitrao momba ny safidiny na ny toe-javatra misy azy ireo, kanefa tsy mandray ny torohevitrao mihitsy.
Raha ny marina dia matetika izy ireo dia mifanohitra tanteraka amin'izay omenao hevitra azy ireo no ataony ary mirona hatrany hamerina hatrany ireo fomba fitondran-tena mahatsiravina sy manimba tena, nefa tsy mianatra avy amin'izy ireo mihitsy.
Raha tokony hijerena manokana sy hahafantatra tena izy ary angamba hanao fatra fitomboana noho ny fihazakazahana am-polony am-polony hafa ny fandehan-javatra mitovy, dia arosony ao aminao avokoa ny fahasosoran-dry zareo sy ny tsy firaharahiany.
Noteren'izy ireo ianao hanao ny asany ara-pihetseham-po ho azy ireo, ary mety hilaza aminao ny fahatsapany tsara kokoa rehefa avy niresaka taminao izy ireo.
Ohatra iray dia mety ho olona iharan'ny fanararaotan'ny sakaizany, milaza aminao ny zavatra mahatsiravina rehetra mitranga ao ambadiky ny varavarana mihidy, fa mijanona miaraka amin'io mpiara-miasa io noho ny fahatsapana 'fitiavana' sy 'tsy fivadihana' diso lalana.
Ka ianao no mifoka amin'ny latabatra amin'ny manaraka rehefa avy misakafo hariva izy ireo satria fantatrao ny zava-mitranga, fa ilay lazaina ho namanao dia faly toy ny totohondry satria tsy dia sorena mihitsy izy ireo: ' efa natolotro anao ny fihenan-tena rehetra, ka nihamafana ny fon'izy ireo.
4. Mandeha Ballistic ry zareo raha miantso azy ireo amin'ny fitondran-tena ratsy na mandratra
Raha milaza amin'ny namanao marina ianao fa efa nilaza izy ireo na nanao zavatra izay mahasosotra anao dia miala tsiny izy ireo ary manandrana manitsy.
Raha milaza zavatra mitovy amin'izany amin'ny namanao sandoka ianao dia mety hiaro tena izy ireo, tsy ho hitanao intsony ny asany, manomboka mamorona lainga mba hahatsapanao fa ianao no diso, ary ajanony ny firesahana aminao fotoana vitsy.
Na tsy voafetra.
Jereo, ny zavatra dia, rehefa misy olona tena miahy anao, dia hanao izay farany azony atao izy ireo mba hahazoana antoka fa misy ifandraisana ny fifandraisanareo.
Raha miahy bebe kokoa ny tenany sy ny zavatra ilainy ary izay ilain'izy ireo izy ireo, dia tsy mahita anao ho olona mendrika hohajaina sy hokarakaraina intsony izy ireo: misy anao fotsiny ho an'ny tombotsoany sy amin'ny fotoana mahamety azy ireo.
Ny fiantsoana azy ireo hivoaka amin'ny bullsh * t dia manaparitaka an'io illusion io, ary ho romotra amin'izany izy ireo.
5. Nanjavona izy ireo rehefa mila azy ireo ianao
Mampihomehy ny fomba mety ahatongavanao eo foana ho an'ny namanao rehefa mila anao izy ireo, fa rehefa mila zavatra mifandimby ianao dia tsy hita na aiza na aiza.
Ie, tsy tena namana mihitsy izany.
Raha sendra sahirana fotsiny izy ireo isaky ny mila azy ireo ianao, na raha matoatoa aminao ary tsy afaka mitazona toky toky nataon'izy ireo taminao, dia misy vintana tsara ihany fa mitazona anao manodidina ny zanany izy ireo tombony manokana.
aiza ny trano john cena
Io koa dia toetra iray mahazatra ny mpifoka rongony, koa mitandrema: raha manapa-kevitra ny olona fa olona tiany ianao, dia mety ho tafiditra amin'ny tontolon'ny ratsy tarehy.
Ho sarotra ny hialana amin'izy ireo, satria hitarika anao ho meloka izy ireo ary hahatonga anao hahatsapa ho toy ny olona ratsy indrindra eto an-tany noho ny tsy nandehanany tamin'izy ireo rehefa marefo sy malahelo daholo izy ireo.
6. Mahatsiaro ho toa mandeha an-tongotra amin'ny atody miaraka amin'izy ireo ianao
Ny namana sandoka dia manantena anao ho zavaboary mpanohana sy mandondona ary mitsiky mandrakariva izay manaiky ny zavatra rehetra lazainy ary mailaka hisarika haingana ary manomboka ady lehibe raha manana hevitra na hevitra tsy mitovy amin'ny azy ianao.
Mety hipoitra momba ny olana ara-politika na ara-tsosialy izy ireo, manantena anao hamerina ny eritreriny, ary hikapoka anao raha sahy tsy mitovy hevitra ianao.
Raha manao izany ianao dia mety haneso anao ampahibemaso izy ireo amin'ny nanaovany izany, milaza aminao fa diso fanantenana izy ireo miaraka aminao noho ny tsy fahitany ny “fahamarinana”, ary manapaka ny fifandraisana aminao mandra-pifohazanao sy hahitanao an'izao tontolo izao ny fomba fijerin'izy ireo.
Ny tena namana dia afaka manaiky ny tsy hifanaraka, ary mifanaja ny hevitry ny tsirairay. Faran'ny.
7. Mety hahazo trondro izy ireo raha mila fanazavana
Ny olona sasany dia ho tonga amin'ny fiainanao ary hiezaka ny hinamana aminao fotsiny mba hifanaraka amin'ny tanjon'ny hafa.
Mampihomehy sy tanora, fa tena mahavariana tokoa ny isan'ny olon-dehibe lazaina fa tsy afaka mitondra tena amin'ny fahamendrehana sy fahamatorana.
Mety hiditra amin'ny fiainanao ny olona vaovao (matetika amin'ny alàlan'ny media sosialy) ary avy hatrany dia be resaka sy mazoto hahafantatra anao.
Amin'ny fotoana fohy, mety hanomboka hametraka fanontaniana manokana momba ny olon-kafa ao amin'ny faribolanao izy ireo, ary raha mandavaka kely ianao dia ho hitanao fa manana namana iraisana ianao - mazàna olona efa nifanao fotoana .
Nisaraka tamina olona iray ve ianao tato ho ato? Ity 'namana' vaovao ity dia mety mitsikilo anao hahita azy ireo ny zavatra alehanao mba hahafahan'izy ireo manao tatitra.
Na angamba mpiara-miasa iray tsy tia anao dia manandrana mihady loto aminao mba handroahana anao.
Mety hihomehy amin'ireo scenario ireo ianao, saingy ho gaga ianao amin'ny fotoana isehoan'izy ireo matetika, na dia eo aza ny hoe mampihomehy tanteraka izy ireo.
8. Tsy miady amin'ny zorony izy ireo
Ny namana sandoka dia tsy hamoaka ny hatok'izy ireo ary hanohana anao raha misy ny fifamaliana eo aminao sy olona hafa.
Tsy hijoro ho anao izy ireo ary hanome toky ny toetranao satria mety hidika izany fa mety hataon'ireo tsy mitovy hevitra aminao ianao.
Fa kosa, hijery mangina izy ireo, hamela anao hiady irery.
Raha toa ka mahazo zavatra avy amin'ny fananany anao amin'ny fiainany izy ireo dia tsy ampy ho azy ireo ny mandray andraikitra amin'ny anaranao. Aleon'izy ireo very ianao toy izay miandany aminao.
9. Fantatrao amin'ny ambaratonga ambonimbony fotsiny izy ireo
Fantatr'izy ireo ny anaranao, ny toerana onenanao, angamba ny karazan-tsakafo tianao, saingy efa ho lavitra izany.
Tsy fantatr'izy ireo izay tena manosika anao hitady. Tsy misy fahatakarana lalindalina kokoa momba anao amin'ny maha-olona tokana anao, ambaratonga ambonin'ireo tsipiriany tsy dia lehibe fotsiny.
Ary izany dia satria tsy dia mametraka fanontaniana manadihady bebe kokoa izay apetraky ny tena namana izy ireo. Tsy natombok'izy ireo mihitsy ny resaka mahaliana mahaliana momba ny fiainana sy ny sisa.
Tsy manontany momba ireo zavatra lehibe mitranga eo amin'ny fiainanao koa izy ireo. Niteraka? Zara raha nahatsikaritra izy ireo fa bevohoka ianao. Very olon-tiana? Aza manantena handefa voninkazo ry zareo.
Raha ny marina dia tsy miraharaha ny hifandray aminao amin'ny ambaratonga misy dikany izy ireo satria tsy mahita na manome lanja anao ho ampahany manan-danja amin'ny fiainany izy ireo.
inona no horesahina amin'ny namana
Ary izany indrindra dia satria…
10. Miresaka momba ny tenany matetika izy ireo
Raha resaka resaka dia ny tenany no lohahevitra tiany.
Mpandram-bolo mifantoka amin'ny resaka ataon'izy ireo izy ireo izay mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny firesahana ny fiainany ary, araka ny efa noresahinay tetsy ambony, ny olan'izy ireo.
Mampifaly anao amin'ny tantara izy ireo momba ny fomba nihaonany tamina olona malaza na ny niainany niainany. Ary ireo dia mety ho tantara efa henonao imbetsaka teo aloha.
Saingy tsy manontany matetika izy ireo hoe manao ahoana ianao na inona no mitranga amin'ny fiainanao. Ary raha manao izany izy ireo, dia amin'ny faran'ny fotoana iarahanareo fotsiny rehefa lany ny lohahevitra rehetra mifandraika amin'izy ireo.
Ary na dia izany aza, rehefa lany zavatra holazaina momba ny tenany izy ireo…
11. Mampiely tsaho sy fifosana izy ireo
Raha naheno vaovaom-baovao mahaliana izy ireo dia azonao antoka fa ny olon-drehetra fantany dia efa nandre izany koa tamin'ny faran'ny andro.
Tian'izy ireo ny fientanam-po amin'ny fandrenesana sy fanelezana tsaho momba ny olon-kafa. Henonao hatrany izany rehefa mamoaka 'zava-misy' kisendrasendra izy ireo dia naka manodidina ny cooler rano.
Mody liana ianao fa zara raha mahafantatra ny antsasaky ny olona resahin'izy ireo. Tsy miraharaha azy ireo anefa izy ireo, raha mbola afaka mandre ny feon'ny feony ihany.
Ary ny fakery an-dry zareo ho namana dia mivoaka rehefa miresaka momba anao amin'ny olon-kafa izy ireo. Mety haka ny iray amin'ireo zavatra vitsivitsy nianarany taminao izy ireo nandritra ny resaka nataonao ary hampiasa azy io ho toy ny vola ara-tsosialy mba hisarika ny saina sy fankasitrahan'ny hafa.
Tsy miafina amin'izy ireo mihitsy ny tsiambaratelonao.
12. Manimba ny fahombiazanao na ny fahasambaranao izy ireo
Na dia mety manao amin'ny asanao aza ianao na faly toa anao amin'ny fifandraisanao manokana, dia tsy ho faly ho anao izy ireo.
Izany dia mifandraika amin'ny # 2 sy ny fanaon'izy ireo mametraka anao ambany. Tsy tian'izy ireo ny mahita olon-kafa manao tsara eo amin'ny fiainana satria manome taratra ny zavatra hitany ho tsy fahombiazany izany.
Ny namana sandoka sasany dia hanary any amina olona iray izay mandeha tsara kokoa noho ny azy ny fiainany satria maharary azy ireo ny hanaiky izany.
Tsy hiarahaba anao izy ireo na hampifaly anao fa hangina fotsiny izy ireo ary hanjavona vetivety amin'ny fiainanao (na maharitra).
Saingy tokony hisy olana ve eo aminao…
13. Hotsarain'izy ireo amin'ny fomba henjana ny hadisoanao, ny tsy fahombiazanao ary ny fitsarana ratsy nataonao
'Nolazaiko anao izany' dia zavatra mety ho renao avy amin'ny namana sandoka.
Haingana izy ireo mitsara sy mitsikera anao ary manondro ireo zavatra tsy nety nataonao. Milaza izy ireo fa milaza ireo zavatra rehetra ireo ho tombontsoanao manokana… hanakanana anao tsy hanao toy izany intsony amin'ny ho avy.
Saingy, raha ny marina, mankafy ny fahatsapana ho ambony noho ianao fotsiny izy ireo.
Mahalana izy ireo no mampionona anao na manome sofiny anao hiresaka momba ny olanao. Vetivety izy ireo dia manolotra vahaolana amin'ny zavatra rehetra, satria izy ireo mahalala tsara indrindra.
Matetika izy ireo dia hanome ny vahaolana na nangatahinao na tsia. Tian'izy ireo ny ho mpamonjy anao mba hahafahanao mitrosa amin'izy ireo, na dia mahasoa aza izy ireo.
14. Mitana lolompo izy ireo ary tsy manadino mihitsy (na avelanao hanadino ianao)
Raha diso ny namanao lazaina fa namanao, dia hotanan'izy ireo tsy ho ela ianao.
Mety hilaza izy ireo fa mamela anao, fa tsy hanao zavatra toa azy ireo.
Ary manana fenitra roa heny izy ireo. Ka raha tara tara ianao hitsena azy ireo dia hananatra anao izy ireo noho izany. Fa raha tara mahita anao izy ireo dia antenain'izy ireo fa ho mora aminy ianao satria 'tsy afaka nampiana io.'
Volana maro na taona maro taty aoriana, indrindra raha te-hanao anao zavatra izy ireo na satria te handratra anao noho ny antony sasany, dia hiteny izy ireo hoe: 'Tadidio rehefa ianao…?'
Ity no kaody: 'Olona ratsy ianao ary tiako tadidinao izany.' Na angamba, 'Manana trosa be amiko ianao noho izany.'
Famantarana mazava 12 tsy manaja anao loatra ny namanao
Famantarana 13 nahalavorary finamanana ianao
10 Famantarana ny finamanana amin'ny lafiny iray + Ahoana no ialana amin'ny iray
Inona no hatao raha mankahala ny namanao ianao
14 Fambara mazava Misy mampiasa anao: Ahoana no ilazana azy
Antony 7 Tokony hitandrina ny amin'ny olona tsara loatra ianao
inona araka ny hevitrao no mahatonga ny namana tsara
avy aiza i randy orton
torohevitra momba ny fifandraisana vehivavy lehibe kokoa
wwe sisa velona andiany 22 novambra
ahoana ny fomba hahatongavana olona manetry tena
tsy afaka mahatakatra ny fomba fitiavana
ny fomba tsy fitiavana ny lehilahy manambady